Kudhinda tekinoroji inoendesa iyo inki kumusoro kwepepa, machira, mapurasitiki, dehwe, PVC, PC uye zvimwe zvinhu kuburikidza nekugadzira ndiro, inking, kumanikidza uye zvimwe zvinyorwa zvakaita senge zvinyorwa, mifananidzo, mifananidzo, uye anti-manyepo, uye wozoteedzera zvirimo muzvinyorwa mumabatch. .
Munguva yese yekuvandudza kwenhoroondo, kudhinda tekinoroji kwave kufambira mberi, zvese mumhando dzekudhinda uye nzira dzekudhinda. Ndedzipi nzira dzezvino dziriko dzekuvandudza kudhinda mhedzisiro? Zvakajairika mashandiro ndeaya anotevera:
Paunenge uchisarudza iyo yekuomesa inki, funga kana iyo yekumusoro yekuomesa tembiricha yeinki yakakodzera tembiricha iyo ipurasitiki inogona kumira.
Ive nekuchenjerera paunenge uchishandisa soluble solvents: Solvents ayo ane imwe nhanho yekunyungudika kwepurasitiki mafirimu anogona kubatsira iyo inki nepurasitiki firimu kuti ibatane, asi kana iyo mhedzisiro yakasimba, inogona kudzora michina zvivakwa zvemufirimu.
Funga nezve kupfavisa uye kubatanidza zvinokuvadza zvinokonzeresa zvemapurasitiki uye zvimwe zvinowedzerwa painki
Ita ongororo yakasimba pane kuomarara, brittleness, kuenzana kugadzikana uye kuwedzera kwekuwedzera kweiyo firimu repurasitiki, nekuti izvi zvinhu zvinokanganisa kugadzikana kweinning adhesion.
Nyatsonzwisisa uye unzwisise basa rezvinhu zveinki muinki: yekudhinda inki ipepa-senge colloid iyo yakaenzana yakavhenganiswa nemavara, zvisungo, mafirita uye zvimwe zvikamu. Semhando yeiyo viscous fluid, inki ine zvimiro zvakasiyana nekuda kwemarudzi ayo akasiyana, ndiko kuti, iri gobvu uye yakatetepa; iyo viscosity yakasiyana, uye nekumhanyisa kumhanya kwakasiyanawo.
Hunhu hwechinhu chinobatanidza chakanaka kana chakaipa: izvo zvinosanganisa zvinhu zvine hunyoro neimwe viscosity uye viscosity. Basa rayo rakawandisa. Sezvo mutakuri weiyo pigment, inoshanda kusanganisa uye kubatanidza yakasimba zvikamu zvakaita seupfu pigment, uye inogonesa inonamira pigments kuti pakupedzisira inamatire kune yakadhindwa chigadzirwa. Hunhu hwe bhainda hunokanganisa iro kubwinya, kupfeka kuramba uye viscosity fluidity.
Kushandiswa kwakakodzera kwezvokuwedzera: kushandiswa kwezvokuwedzera kunonyanya kushanda mukudhinda. Anowanzoshandiswa anobatsira anosanganisira diluents, zvinowedzera, zvinodzikisira, anti-tack vamiririri, uye ingi kugadzirisa. Naizvozvo, iko kudhinda kwakanaka uye kunamatira kwakasimba uye kupararira kwekudhinda inki hakuparadzanisike kubva kune zvinowedzerwa.
Kambani yangu inoteera zviga zvemusika uye inoshandisa nzira dziri pamusoro apa pakudhinda mapurasitiki zvigadzirwa zvinogadziriswa? Mhinduro: Kwete izvozvo chete. LGLPAK LTD. yakaita yekusajairika-kuwanda panguva yechigadzirwa kudhinda-ichideredza resolution. Iyi inoita senge yakapusa mashandiro nzira inomhanyisa kukomberedza tekinoroji inokwidza kudhinda kwechigadzirwa kusvika padanho nyowani: zvigadzirwa zvepurasitiki zvakadhindwa nekambani yedu zvinoonekwa zvine hungwaru zvichienzaniswa nezvigadzirwa zvakafanana: iwo mavara akajeka uye mapatani akajeka.
Mukutsvaga kwehunhu hwechigadzirwa uye chitarisiko, isu hatigone kungotevera tsoka dzehunyanzvi hwemberi, asi zvakare kudzoka mukufungisisa uye kuita sarudzo yakakodzera kwazvo.
Post nguva: Aug-21-2021